China Polyethylene Glyeol 300 PEG 300 fekitori uye vagadziri | Yinuoxin
Main Mafomu:Ichi chigadzirwa hachina-chepfu, chisiri-chinogumbura uye chine yakanaka mvura solubility, kuenderana, lubrication, adhesion uye kupisa kwemafuta. Nekudaro, iyo PEG-300 akateedzana akakodzera kugadzirira zvakapfava makapisi. Iyo ine kuwirirana kwakawanda nemhando dzakasiyana dzemanyoro, saka yakanaka solvent uye solubilizer uye inoshandiswa zvakanyanya mukugadzirisa kwemvura, senge mhinduro yemumuromo, madonhwe eziso, nezvimwe.
Kurongedza Nzira:50kg dhiramu repurasitiki
Pasherufu Hupenyu: Makore matatu
Medical polyethylene glycol inozivikanwawo se polyethylene oxide (PEO). Linear polyether yakawanikwa nerin'i kuvhura polymerization ye ethylene oxide. Iwo makuru ekushandisa mune biomedical munda ndeaya anotevera:
1. Bata lens solution. Iyo viscosity ye polyethylene glycol aqueous solution inonzwisisika kune shear rate uye mabhakitiriya haasi nyore kukura pane polyethylene glycol.
2. Synthetic lubricant. Ethylene oxide uye mvura condensation polymer. Kuti ugadzirire chizoro chemvura inonyungudika nemvura, inogona zvakare kushandiswa seye solvent yeacetylsalicylic acid, caffeine, nimodipine uye nezvimwe zvisingasviki zvinodhaka zvekugadzirira jekiseni.
3. Kuendesa zvinodhaka uye kutakura enzyme inotakura. Kana polyethylene glycol aqueous solution yakange yakaputirwa pane yekunze piritsi, kupararira kwemushonga mupiritsi kwaigona kudzorwa kunatsiridza kushanda kwayo.
4.Surface nadzurudzo yezvokurapa polymer zvinhu. Iyo biocompatibility yezvokurapa polymer zvinhu zvakasangana neropa zvinogona kuvandudzwa ne adsorption, kuchengetwa uye kubatanidzwa kweamphiphilic copolymer ine polyethylene glycol pamusoro pezvinhu zvekurapa polymer zvinhu.
5.Gadzira alkanol yekudzivirira firimu.
6. Kugadzirira kwehydrophilic anticoagulant polyurethane.
7. Polyethylene glycol 4000 ndeye osmotic laxative, iyo inogona kuwedzera osmotic kumanikidza, kupinza mvura, kupfava chigaro, kuwedzera vhoriyamu, nekusimudzira ura peristalsis uye defecation.
8. Denture inogadzirisa. Polyethylene glycol raishandiswa sechinhu chinoumba chezvemazino chinogadzirisa nekuda kwayo isiri-chepfu uye gelling zvivakwa.
9. PEG 4000 neEGI 6000 zvinowanzoshandiswa kusimudzira fusion yesero kana protoplast fusion uye kubatsira zvipenyu (semuenzaniso mbiriso) kunotora DNA panguva yeshanduko. Pegi inogona kupinza mvura iri mumhinduro, saka inoshandiswawo kugadzirisa mhinduro.
10. Mukuyedza kwekudzidza mapuroteni mamorekuru, tinogona kuteedzera yakazara nzvimbo mu vivo kuratidza simba renzvimbo yekutsvikinyidzana pane chimiro cheprotein
Magadzirirwo Chitarisiko （25 ℃） RuvaraPt-Co HydroxylvaluemgKOH / g Molecular uremu Solidification poindi Zvemukati zvemvura （%） PH kukosha1% Aqueous mhinduro）
PEG-300 Isina kuchena yakajeka mvura -20 340 ~ 416 270 ~ 330 - .50.5 5.0 ～ 7.0
Pashure: Carbopol 940
Zvadaro: Carbopol 20